နီပေါနိုင်ငံသား သုံးပုံ-နှစ်ပုံကျော်တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်သော ပဋိပစ္စည်းများ ထွက်ပေါ်နေပြီဖြစ်ဟု စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
နီပေါနိုင်ငံ ခတ္တမန္ဒူမြို့၌ ဇွန်လ ၈ ရက်တွင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု ခံယူနေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ခတ္တမန္ဒူ ၊ ဩဂုတ် ၃၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
နီပေါနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ သုံးပုံ-နှစ်ပုံကျော်တွင် COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ပဋိပစ္စည်းများ ထွက်ပေါ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ကျန်းမာရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အား(MoHP)က နိုင်ငံအနှံ့ကောက်ယူသော စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လူအုပ်စုအကြား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု အကန့်အသတ်ရှိနေစဉ်မှာပင် နီပေါလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကူးစက် ပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း အဆင့်မြင့် နီပေါတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အသက် ၆၀ နှင့်အထက် လူပေါင်း ၁၃,၁၆၁ ဦးအား ဇူလိုင် ၅ ရက်မှ ဩဂုတ် ၁၄ ရက်အတွင်း ကျပန်းရွေးချယ်ခဲ့ပြီး seroprevalence လေ့လာမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား နီပေါနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲခန်း၌ စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
စမ်းသပ်ထားသည့် ဓာတ်ခွဲနမူနာများ၏ ၆၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းတွင် ရောဂါကာကွယ်သည့် ပဋိပစ္စည်းများအား တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဩဂုတ် ၂၉ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်သော သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းဓာတ်ခွဲနမူနာများသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသူ နှင့် ကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံသူ နှစ်မျိုးလုံးအား ကိုယ်စားပြုကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“ပဋိပစ္စည်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ နမူနာ သုံးပုံနှစ်ပုံကျော်ကိုကြည့်ရင် နီပေါနိုင်ငံမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနဲ့အတူ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံဖို့ အကန့်အသတ်ရှိနေချိန်မှာ လူတွေကြား ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားစနစ် ပဋိပစ္စည်းတွေထွက်ပေါ်မှုဟာ အလွန်မြင့်မားတဲ့ပမာဏတစ်ခုမှာ ရှိနေတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီးဌာန၏ ပူးတွဲပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Samir Kumar Adhikari က ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
လူအများစုသည် ကာကွယ်ဆေး မထိုးနှံရသေးသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသော အလွန်ကူးစက်မြန်သည့် Delta မျိုးဗီဇပြောင်းပိုးနှင့်အတူ ၎င်းတို့သည် COVID-19 ရောဂါ ပြန့်နှံ့မှု အန္တရာယ် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
နီပေါနိုင်ငံ၌ ဧပြီလကတည်းက ဒုတိယအကြိမ် ရောဂါအပြင်းအထန် ကူးစက်မှုတစ်ဖန်ဖြစ်ပွားခြင်းအား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရန် နိုင်ငံ့ လူဦးရေ သန်း ၃၀ အနက် ဩဂုတ် ၂၉ ရက်အထိ ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးသူ ၅.၀၆ သန်းရှိပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးပြီးထားသူ ၄.၀၅ သန်းရှိကြောင်း သိရသည်။
ရောဂါကာကွယ်သော ပဋိပစ္စည်းများကို မြို့ပြ ၊ ကျေးလက် နှင့် ကျား/မ ၊ အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုး ၊ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအားလုံးရှိ လူများ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း နှင့် ပထမအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံထားသူများတွင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ် ထိုးနှံထားသူများတွင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“ဒါက ကျွန်တော်တို့ ထိုးနှံထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေက အလွန်အစွမ်းထိရောက်တယ်ဆိုတာ ပြနေပါတယ်။”ဟု ဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသည့် လူအများစုသည် Sinopharm ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်သည့် တရုတ် Vero Cell ကာကွယ်ဆေးအား ရရှိခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းဇယားများအရ သိရသည်။ (Xinhua)
Over two-thirds of Nepalis have COVID-19 antibodies: survey
KATHMANDU, Aug. 30 (Xinhua) — Over two-thirds of Nepal’s population has developed antibodies against COVID-19, as shown byanationwide survey conducted by the Ministry of Health and Population (MoHP).
The finding suggests that the coronavirus has become widespread in Nepali society amid limited vaccination for the population, saidasenior Nepali official.
According to the ministry,aseroprevalence study was conducted on 13,161 people aged over six years and chosen randomly between July5and Aug. 14, and the samples were tested at Nepal’s National Public Health Laboratory.
“Antibodies were found in 68.6 percent of the samples tested,” the ministry said inapress statement on Sunday evening, noting that the samples represented both vaccinated and unvaccinated people.
“Over two-thirds of samples showing antibodies suggest thatasignificant number of people developed antibodies due to infection with the virus, given the context of limited vaccination in Nepal,” Samir Kumar Adhikari, joint spokesman at the ministry, told Xinhua.
“As the majority of people are still unvaccinated, there is still the risk of spread of COVID-19 with the highly infectious Delta variant present in society,” he said.
As of Sunday, of Nepal’s 30 million population, 5.06 million had been administered one dose of COVID-19 vaccines, while 4.05 million had been fully vaccinated against the virus which has been ravaging the country for the second time since April, according to the Health Ministry.
The ministry noted that antibodies were found in samples of people in all age groups, professions, both sexes and rural and urban areas, and seen in 80 percent of people vaccinated with the first dose and 90 percent administered with both doses.
“This shows that the vaccines that we are administering have been very effective,” the ministry said. The majority of the vaccinated people got the Chinese Vero Cell Vaccine developed by the Sinopharm company, according to the ministry statistics. Enditem
Photo – A woman receivesadose of COVID-19 vaccine in Kathmandu, Nepal, June 8, 2021. (Xinhua/Sulav Shrestha)